सिन्डिकेट कायम गरे पाँच बर्षको कैद! « Deshko News
सिन्डिकेट कायम गरे पाँच बर्षको कैद!
मूल विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ८ मा बजार सीमित गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा ८ (क) थप गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा हुने एकाधिकार अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
एकाधिकार कायम राख्ने मनसायबाट अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानका सवारीसाधन सञ्चालनमा बाधा पु¥याउन नमिल्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । सिन्डिकेट विरुद्धको कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । कसुरको मात्रा हेरेर दुवै सजायसमेत हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन ।